खोजी रिपोर्टिङले दिएको झुट सन्देश, जसलाई डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिए यस्तो जवाफ ! « GDP Nepal
Published On :2November, 2019 9:44 pm
काठमाडौं । बालबालिकामा विद्यमान कुपोषण र गरिवी विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान बलियो नेपाल सुरू गर्ने अभियन्तामध्येका प्रमुख अर्थात संस्थाका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लले यस अभियानका सम्बन्धमा मुलुकका केही टाइकुन मिडियाले गरिरहेको दुश्प्रचारको बुँदागत रुपमा खण्डन गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस अभियानको विधिवत उद्घाटन गर्नुअघि नै रोक्ने प्रयाशस्वरुप विभिन्न मिडियामा यसविरुद्ध अभियान सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका वाग्लेले फेसबुकमा यो हल्लैहल्लको देश शीर्षकमा लामो टिप्पणी पोष्ट गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ उनको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
**हल्लै हल्लाको देश**
*अस्ट्रेलियाको Health Star Rating (HSR) मा ३*** भन्दा माथि तोकिएका उत्पादनसंगमात्रै काम गरिनेछ, जस्तै लिटो । पत्रु भनिने प्राय junk food को स्तर १ को हाराहारी भएकोले हामी ती छुँदैनौं । HSR को उद्देश्य sugar, sodium, saturated fat र क्यालोरी घटाउने अनि fiber, protein, फलफुल, तरकारी, गेडागुडीको आहार बढाउने हो ।
*योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नेपालको ‘बहु-क्षेत्रगत पोषण योजना, २०१८-२०२२’ तयार गरियो । नेपालमा पर्सी शुरु हुने Scaling Up Nutrition (SUN) को विश्व सम्मेलनको बिउ त्यहीबेला रोपेको हो — ६१ देशका १२०० व्यक्ति आउंदैछन् । मानव संसाधन अर्थशास्त्रमा रुचि पुरानो हो; नोबेल बिजेताहरु शुल्त्ज़, सोलो, हेक्म्यान, बेनर्जीको कामबाट प्रभावित छु । जन्मेदेखि २३ महिनाको अवधिमा गरिने स्वास्थ्य र पोषणको लगानी पछि कैयन गुणा राष्ट्रले GDP वृद्धि मार्फत उठाउने कुरा रोचक शोधको विषय छदैंछ । UN को पांचवटा ‘मानव विकास प्रतिवेदन’मा काम गरियो ।
*यो पढ्ने: tinyurl.com/y6gegqat
*यो पनि पढ्ने: baliyonepal.com/faq